पहिरोले एक परिवार नै बेपत्ता
१३ माघ २०७७, मङ्गलवार
जनता भ्वाइस calendar_today ६ साउन २०७७, 3:49 am
साउन ६, पूर्वी नवलपरासी ।
पछिल्ला केही दिन यता नेपालमा परिरहेका घनघोर वर्षात्का कारण बाढी तथा पहिरोका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका बेला पूर्वी नवलपरासीको बुलिङटारमा पहिरोले घर पुरिँदा दुई जना सम्पर्क विहीन भएका छन् । उक्त पहिरोले बुलिङटार गाउँपालिका २ डाँडाझेरीका ७० वर्षीय शेरबहादुर सार्की र उनकी श्रीमती बेपत्ता भएका गाउँपालिकाका अध्यक्ष शशी किरण बस्ताकोटीले जानकारी दिएका छन् ।
आफ्नै घरमा सुतिरहेका बेला उनीहरुलाई मंगलबार बिहान करिब तीन बजेतिर आएको पहिरोले घरसँगै पुरेको हो । सार्की परिवारलाई पहिरोले बेपत्ता बनाए सँगै बाख्रा र कुखुरा पनि पुरेको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक रेग्मीले भने घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको बताए ।’
पहिरोका कारण बाटो अवरुद्ध छ, टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन, एसपी रेग्मीले भने, ‘त्यसैले घटनाको विस्तृत विवरण आइसकेको छैन ।’ यतिबेला सम्म पनि घटनास्थलमा प्रहरी पुग्न सकेको छैन । स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधि उद्धारमा खटिएका छन् । यस्तै अर्को घटनामा विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको भित्री सडकमा लु २ च ६१७१ नम्बरको पिकअप भ्यानलाई खहरे खोलाले बगाएको छ । खहरेको शिरमा अचानक पानी परेर खहरेमा बाढी आएका कारण उक्त पिकअप भ्यान बगाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
गाेकुलगङ्गामा नेकपाकाे भव्य कार्यक्रम सम्पन्न, जिम्मेवारी पाए महिलाहरुले समेत राम्रो…
ओली बिना यो मूलूक चल्दैन- मन्त्री ढुङ्गेल (भिडियो सहित)
Kumar Shrestha calendar_today २३ पुष २०७७, 10:58 am
२३ पुष, रामेछाप
प्रधानमन्त्री के.पी.ओली भर्याङबाट झर्न चाहेको, विधिबाट झर्न चाहदा भर्याङ नै झिकिदिएको कारणले यो सबै भएको हो । केपी ओली बिना यो मूलूक नै नचल्ने भएको कारण नेकपाले यो अभियान चलाएको बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताएका छन् ।
नेकपा ओली पक्षले रामेछापमा हिजो गरेको जिल्ला कमिटि बैठकमा बोल्दै मन्त्री ढुङ्गेलले ‘नेकपा जस्तो राज मार्ग छाडेर गोरेटोमा लागे कुकुरले समेत खेद्ने बताएका छन् । संसद विघटन पश्चात कित्ताकाट हुँदा साथ नदिनेलाई पछि बहिष्कार समेत गरिने उनले थपे ।
साथै नेपाल सरकारले व्यवसायी लक्षित गरि सुरु गरेको सहुलियत व्याजको कर्जा रामेछापमा १ हप्ता भित्रै सुरु हुने उनले बताएका छन् । उनका अनुसार अब कृषि विकास बैंकबाट १ हप्ता भित्र सो ऋण लिन सकिन्छ ।
संसद विघटन बिरुद्ध जुट्दै कांग्रेस
जनता भ्वाइस calendar_today २३ पुष २०७७, 4:56 am
२३ पौष रामेछाप ।
उपप्रधान मन्त्री ईश्वर पोखरेलले संसद पुनर्स्थापन नहुने र तोकेको समयमा चुनाब हुने उद्घोष गरिरहेको बेला नेपाली कांग्रेसले भने संसद बिघटनको बिरोधमा सक्रियता देखाई रहेको छ । नेकपा रामेछाप ओली पक्षको बैठकमा संबोधन गर्न उपप्रधान मन्त्री पोखरेलले संसद पुनर्स्थापन नहुने र तोकेको समयमा चुनाब हुने बताएका थिए ।
यता नेपाली कांग्रेस रामेछापका सभापती लबश्री न्यौपाने भने नेपालको संविधान भन्दा माथी कोहि छैन र अदालतको फैसला नआई संसद पुनर्स्थापन हुने – नहुने, चुनाब हुने-नहुने कुरा बोली हाल्नु संवैधानिक नभएको बताउछन् ।
सभापती न्यौपानेका अनुसार संसद विघटनको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस लागि रहने बताउछन् ।
कांग्रेसले पौष २५ गते देश भर विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरि रहेको छ ।
तोकेको समयमा चुनाब हुन्छ, तयारीमा लाग्नुस् – उपप्रधान मन्त्री ईश्वर पोखरेल
Kumar Shrestha calendar_today २२ पुष २०७७, 12:03 pm
पुष २२, रामेछाप ।
ओलीले तोकेको समयमा अवश्य चुनाब हुने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओलीपक्षले रामेछापमा गरेको तेस्रो जिल्ला कमिटि बैठकलाई संवोधन गर्दै उपप्रधान मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनका अनुसार अब संसद पुनर्स्थापन हुने कुरा नसोचे पनि हुन्छ । बरु अब चुनाबको तयारीमा लाग्दा हुन्छ । ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको हैसियतले जनता सामु जानु संवैधानिक भएको र गलत हातमा सरकार जानबाट जोगाउन संसद बिघटनको बाटो रोजेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक आज
जनता भ्वाइस calendar_today १७ पुष २०७७, 4:46 am
१७ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दै छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि स्थायी सदन राष्ट्रियसभाको बैठक आज पहिलो पटक बस्न लागेको हो । बैठक अपराह्न चार बजे बोलाइएको छ ।
आजको बैठकको सुरुमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैठक आह्वान गरेको सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाइने छ । यस्तै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे पनि जानकारी गराइने छ ।
अधिवेशन नचलेको अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउबाट भएका चार समिति गठनको आदेश अनुमोदन गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि छ ।
त्यसपछि अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवसरमा संसदीय दलका नेताहरुले बोल्ने कार्यसूची राखिएको छ ।
अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएका विभिन्न ७ वटा अध्यादेशहरु पनि पेस हुने छन् ।
यसबीचमा संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्यसन्चालन तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश, तेनाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमन सम्बन्धी अध्यादेश, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, हिंसाविरुद्ध केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएका थिए ।
अन्तिममा बहालवाला तथा पूर्वसांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची पनि छ । यसबीचमा सानु शिवा, सूर्यबहादुर केसी, ओमकार प्रसाद गौचन, दीपकबहादुर गुरुङ र इन्द्रहाङ लिम्बुको निधन भएको थियो । अनलाईन खबरले लेखेको छ ।
सालकको खपेटा सहित दुई जना पक्राउ
जनता भ्वाइस calendar_today १६ पुष २०७७, 7:36 am
चन्द्रागिरी नगरपालिका-२ नागढुङ्गाबाट सालकको खपेटा सहित २ जनालाई बुधबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा धादिङ धुनिबेशी नगरपालिका-५ घर भएका १९ वर्षीय मनोज राई र नुवाकोट बेल्कोटगडि नगरपालिका-२ घर भएका २३ वर्षीय सूर्य तामाङ रहेका छन् ।
धादिङबाट काठमाडौंतर्फ आउदै गरेको बा.३ ख ६१३८ नम्बरको बसलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटबाट खटिएको प्रहरीले जाँच गर्दा बसमा सवार राईको झोलामा उक्त खपेटा फेला पारेपछि राई र उक्त खपेटा लिन आएका तामाङ समेतलाई सितापाईलाबाट पक्राउ गरेको हो ।
यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ
संसद बिघटन विरुद्ध कांग्रेसको विरोध
Kumar Shrestha calendar_today १३ पुष २०७७, 7:40 am
पौष १३ रामेछाप ।
नेपाली कांग्रेस रामेछापले संसद बिघटन विरुद्ध र्याली गरेको छ । मन्थली नगरपालिका वडा नं. १ स्थित विपि चोकबाट सुरु भएको र्याली कटहरबोट हुँदै देवकोटाचोकमा आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो । र्यालीमा ओली सरकार विरुद्ध अनेकानेक नारा लगाईएको थियो ।
हरेक प्रधानमन्त्रीले यसरी संसद विघटन गर्दै जाने हो भने देशमा स्थायी सरकार नहुने र देशको विकास ठप्प हुने कारण देखाउदै यो विरोध र्याली गर्न परेको नेपाली कांग्रेस रामेछापका पुर्व सभापती रामचन्द्र खड्काले बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पाटीको यस्तै हर्कत रहिरहने हो भने नेपाली जनतालाई हक अधिकारका दिलाउनकालागि नेपाली कांग्रेसको सरकारको विकल्प नरहेको नेपाली कांग्रेस रामेछापका सभापती लवश्री न्यौपानेले बताए ।
संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
जनता भ्वाइस calendar_today ८ पुष २०७७, 9:42 am
८ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संसद विघटनविरुद्ध परेको १२ वटा रिटको बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।
इजलासले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने गरी पठाउन आदेश दिएका छन् । तर संसद विघटनको कदम रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे । अब यी सबै रिटमा शुक्रबार सं‌वैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको स्वीकृति असंवैधानिक भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सां‌सदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीसमेत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
बुधबार कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेलसमेत, लोकेन्द्र केसीसमेत, ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत, शालिकराम सापकोटासमेत, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अनिता गौतम पौडेलसमेत, दीपक राईसमेत, तुलसी शिंखडाले पनि रिट दायर गरेका थिए ।
सबैजसो रिटमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न माग गरिएको छ र मुद्धाको किनारा नलाग्दासम्म संसद सञ्चालनको अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक’
बुधबार स‌ंसद विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाईमा कानुन व्यवसायी र संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै उनीहरुले गरेकाे काम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए ।
बहसमा भाग लिने शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, गोविन्द बन्दी लगायतले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्रीले संसद छलेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री निवेदक र राष्ट्रपति सीडीओ जस्तो हुनुभयो । तोक लगाइदिनुभयो । यो इजलासले आजको मितिमा राष्ट्रपतिको पत्र स्थगत गर्न गर्नुपर्छ । अन्तरिम आदेश होस् ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले पनि अन्तरिम आदेशसहित पूर्ण इजलासमा बहस गर्नुपर्ने बताएका थिए । नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि संसद भंग गरेँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको भन्दै त्यसो गर्न पाइन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
रिट निवेदकहरुको तर्फबाट बहस सुनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय सुनाए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एउटा धारा ७६ मात्र छ, त्यो कसरी गर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतले निर्क्यौल गर्छ’ उनले भने । अनलाईन खबरले लेखेको छ ।
बिग्रियो रोड मार्किङ पोत्दा पोत्दै
जनता भ्वाइस calendar_today ३ पुष २०७७, 11:19 am
पौष ३ रामेछाप ।
मन्थलीको देवकोटा चोकदेखि पुरानो कटहरबोटसम्म डिभिजन सडक कार्यालय, खुर्कोट सिन्धुलीले गरेको रोड मार्किङको सम्बन्धमा आलोचना सुरु भएको छ । उक्त स्थानको सडकको बीच भागमा ठेकेदार उमेश कडरिया मार्फत् गरिएको रोड मार्किङ, मार्किङ् गर्दागर्दै लत्पत्तिएर हेरिनसक्नु भएको छ ।
दिउँसोको समयमा सडक अतिव्यस्त हुँदा उक्त सडक मार्किङमा समस्या देखिएको मन्थली बजारका स्थानीयहरुले बताएका छन् । सेतो इनामेलले लगाउँदा लगाउँदै उक्त मार्किङ् लाइनबाट सवारीहरु आवतजावत गर्दा इनामेल लत्पत्तिएको छ भने मार्किङ समेत पुछिएको छ । उक्त कार्यका ठेकेदार कडरियालाई टेलिफोन सम्पर्क गरी मार्किङ कार्यमा समस्या देखाउँदा सवारी चालकहरुले आफ्नो कार्यलाई सहयोग नगरी इनामेल नसुक्दै सवारी चलाएर समस्या देखिएको बताएका छन् ।
उक्त मार्किङको बारेमा कुराकानी गर्दै कडरियाले भने, ‘म आफ्ना कामदारहरुलाई काम लगाएर विशेष कामले सिन्धुली आएको छु । सडकमा लगाएको मार्किङ् कामै नलाग्ने भएर लत्पत्तिएको रहेछ भने पुनः त्यसलाई भोलि मार्किङ गर्नेछु । भन्न त मैले स्थानीय ट्राफिकलाई सडक मार्किङको बारेमा जानकारी गराएको थिएँ । मैले सडक विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै काम गरेको हूँ ।’
सडक मार्किङमा इनामेललाई निकै पातलो बनाई लगाउनुले पनि सो समस्या आएको स्थलगत अवलोकन गर्दा देखिएको छ । यस सम्बन्धमा थप जानकारी लिन डिभिजन सडक कार्यालय खुकोर्टका इन्जिनियर रामबहादुर विश्वकर्मालाई टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।
Fiber To The Home – FTTH सर्भिस छिटो र सस्तो, यो सेवा लिन के गर्ने?
Kumar Shrestha calendar_today ३ पुष २०७७, 6:20 am
Fiber To The Home – FTTH सर्भिस छिटो र सस्तो हुने टेलिकम रामेछापका प्रमुख विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताएका छन् । रामेछापमा यो सेवा छिट्टै सुरु हुने जानकारी उनले दिए ।
Fiber To The Home – FTTH सर्भिस सुचारु भए पश्चात टेलिकमले दिने ईन्टरनेट सेवा झनै प्रभावकारी हुने उनको भनाई छ । उनका अनुसार ,ADSL सेवा लिई राखेका ग्राहकहरूले केहि समय पुरानै सेवा चलाउन चाहे पनि केहि समय पछि नयाँ सेवामा अपग्रेट हुन पर्नेछ ।
यो सेवा लिन के गर्ने? (बाँकी भिडियोमा)
नेकपाले वडा देखि गरेको भ्रष्टचार ‘सेन्टर कलेक्शन हुन्छ’-रत्न कार्की
Kumar Shrestha calendar_today ३ पुष २०७७, 2:58 am
नेकपा सरकारको विरोध नेपाली कांग्रेस, मानव अधिकार तथा अन्यहरूले मात्रै नगरि नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड) आफैले गरिरहेको प्रष्ट देखिएको नेपाली कांग्रेस रामेछापका नेता रत्न कार्कीले बताए । नेपाली कांग्रेस रामेछापले आयोजना गरेको विरोध जुलुसमा संवोधन गर्दै कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।
सभा संवोधन गर्दै कार्की भन्छन् : ‘नेकपालाई भ्रष्टचार गर्न हरेक तहबाट छुट हुन्छ । वडा देखि नै भ्रष्टचार हुन्छ । तर सबै भ्रष्टचार गरेको पैसा ‘सेन्टर कलेक्शन’ हुन्छ । सो रकम उनिहरूले आफ्नो पार्टीलाई मजबुद बनाउन लगाउछन् । र मूलुक कब्जा गर्न खोज्छन् ।’
उनका अनुसार: ‘ नेकपाको सरकार अधिनायकवाद तर्फ लागेको छ । नेकपाले कांग्रेसका वरिष्ट नेतालाई समेत लाठ्ठी चार्ज गराउन पछि नपरेकोले नेकपा सरकारको नैतिकता प्रष्ट देखिन्छ ।’
कृषि वन कार्यक्रमको नाममा ठगी, शाखा प्रमुखले नै आफ्नै कार्यालय विरुद्ध बुझाए ज्ञापनपत्र
जनता भ्वाइस calendar_today ३० मङ्सिर २०७७, 7:34 am
मंसिर ३०, प्रकाश न्यौपाने / कुमार श्रेष्ठ, रामेछाप
रामेछाप र मन्थली नगरपालिकाका केही वडाहरुमा लागु भइरहेको कृषि वन कार्यक्रमले गरेको बदमासीका बारे उक्त संस्थाका फिल्ड सहजकर्ता तथा शाखा प्रमुख सरोज लामा सहित्को कर्मचारीको टोलीले आफ्नै कार्यालयको विरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आइतबार उक्त कार्यक्रमका मन्थली शाखा प्रमुख सरोज लामा तथा संस्थाका ८ जना फिल्ड स्तरका कर्मचारीहरुले संयुक्त दस्तखत गरी ‘समुचित न्यायिक पलह गर्न गराउन’ भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
विगत लामो समयदेखि जिल्लाका २वटै नगरपालिकाहरुमा संचालन भइरहेको उक्त कार्यक्रमको पारदर्शिता निकै धमिलो बन्दै गएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रको विवरण यस्तो रहेको छ :
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मन्थली रामेछाप
विषय : समुचित न्यायिक पहल गर्न गराउन अनुरोध
प्रस्तुत विषयमा बागमती प्रदेश, रामेछाप जिल्लामा संचालित ‘एसोसियशन अफ एग्रिकल्चर नेपाल (आन ) नामक संस्थाको एग्रोफरेष्ट्री प्रोजेक्ट २०७५ सालको अन्त्यतिर संचालनमा आएको जसको हो । कर्मचारी विज्ञापन रामेछापको स्थानीय पत्रपत्रिका, एफएम रेडियोद्वारा सुनेपछि तपशिलका हामीहरुले संस्थाको नियमानुसार निवेदन ग¥यौँ, परीक्षा पनि दियाँै । त्यसपछि धेरै सहभागीहरु मध्यबाट छनोट भई कामका लाग्यौँ । समुदायमा गएर हमीलाई जानकारी भएसम्म कार्यक्रमको जानकारी गराउँदै संस्थाको नियमानुसार सदस्य बन्न प्रत्येक कृषकले रु ५०० (अक्षरेपि पाँच सय रुपैँया मात्र) उठायाँै । सो पछि केही सदस्यहरुलाई बिरुवा वितरण ग¥यौँ भने केही सदस्यहरुलाई तरकारीका बिऊ, केहीलाई खाद्यान्नको बिऊ वितरण गरि दश वर्षका लागि १५ प्रतिशत ढुवानी शुल्क भनि रू. १,५००÷– (अक्षरेपि एक हजार पाँच सय रूपैयाँ मात्र) उठायौँ ।
उक्त रकम जिल्ला शाखाका प्रमुखलाई जिम्मा लगाउनु पथ्र्याे । शाखा प्रमुखले केन्द्रीय अध्यक्षले भनेको नम्बरमा जम्मा गरिदिनु पर्ने प्रावधान बनाइएको थियो । त्यो पनि २०७६ साल असोज १० मा कोषभर ५ महिनालाई हामी मध्येको सरोज लामालाई शाखाको जिम्मेवारी दिएपछि जानकारी भएको अवगत गराउन चाहन्छौँ । त्यसपछि केण्द्रीय कार्यालयका आधिकारिक व्यक्ति कोही पनि जिल्लामा आउनुभएन । मात्र फोनबाट जिम्मा दिने ÷लिने थियो । बढीमा पाँच महिनालाई जिम्मेवार दिएर शाखा प्रमुख डबल रोकाय भन्ने व्यक्ति गएपछि नफर्किएको र उहाँको विकल्पमा सरोज लामालाई शाखा प्रमुख बनाइएको थियो । त्यस पछि तोकिएका शाखा प्रमुख र २ सय जना भन्दामाथि सदस्यहरु बनाई ढुवानी १५ प्रतिशत असुल गरिसकेको नीरा पाख्रिनलाई स्थायी लेटर पठाई दिएर कार्य गर्न गराउन फोनबाट आदेश वा निर्देशन आउने र शाखामा जम्मा भएको रकम पठाउन भन्ने र सो रकम बैङ्कबाट वा आई.एम.ई बाट पठाउने गरेको थियो ।
अस्थायी रहुन्जेल रु. १,०००÷– (अक्षरेपि दश हजार रुपैयाँ) र नियुक्ति पत्र पाएपछि रु. १६,५००÷– (अक्षरेपि सोह्र हजार पाँच सय मात्र) र दैनिक भ्रमण भत्ता वा फोन खर्च पाउने भनि सहमति गरिएकोमा अहिलेसम्म तलब भनेर एक रुपैयाँ नदिएको आफूहरुले काम गरेको तलब माग गर्दा भोलिभोलि भनेर टार्ने, फोनमा सम्पर्क गर्दा फोन नै नउठाउने जस्ता व्यवहार गर्न थाले । खर्च कसरी चलाउने भन्दा पाउनु पर्ने तलबको २५ प्रतिशत खर्च लिनु भनिन्थ्यो । सोही बमोजिम गरियो । कार्यक्रम सुस्त चलिरहेको समयमा लकडाउन भयो । लगभग ६ महिनाको लकडाउन पछी खुलेको महिनौँ हुँदासम्म केन्द्रीय कार्यालयले कार्यक्रम सुचारु तर्फ कुनै चासो नदिएको र सदस्य हामी आफै आफन्तहरु रहेको र गाउँले ईष्टमित्र रहेका छन् । बन्दाबन्दी पश्चात खैत कार्यक्रम भनेर सोधिन्छ हामी सँग कुनै जवाफ हुदैन । फोन ग¥यो केही दिनमा हामी आउदैछौँ भन्छन् आउदैनन् । हामीहरुले हाम्रो आफ्नै गाउँले, छिमेकी, आफन्त सदस्य बनाएका छौँ । समाजमा हाम्रा नकरात्मक कुरा काट्न थालिएको छ । नत हामीले तलब पायौँ नत कार्यक्रम नियमित संचालन भएर गाउँले आफन्त सन्तुष्ट भए । हामी गाउँमा सिर ठाडो गरेर हिड्न नपाउने स्थिति भएको छ । त्यसैले हाम्रो समाजमा बाच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गराउन हाम्रा गाउँले आफन्त छन् ।
न्यायका लागी किट कार्यक्रम किट रकमको फिर्ता गर्न गराउन यो निवेदन लेख्दैछौँ । हामीले हालसम्म १४९६ जना सदस्यता वितरण गरेका छौँ । जस मध्ये ४२२ जना सक्रिय कृषकको रुपमा कार्ड वितरण गरेका छौँ । रामेछाप र मन्थली नगरपालिकामा जम्मा गरि १४९६ कृषकको न्यायका लागी तपशिल हामीहरुको समाजमा तिरस्कृत हुनबाट बचाउनका निम्ती र हामीले काम गरेको दिनका पारिश्रमिक प्राप्त गर्नका निमित्त अफिस संचालन घरको घरभाडा प्राप्तिका लागी र कार्यक्र हुनेभए नियमित क्रियाकलाप गर्न गराउँन यदि नहुने भए जनताको यानी कृषकहरुको आफ्नो रकम फिर्ता गराउँनका लागि केन्द्रीय सरहरु झिकाई स्थानीय तहको समपस्थितिमा छलफल गर्ने गराउँने वातावरण मिलाउन सादर अनुरोध गर्दछौ । केन्द्रिय कार्यलय सिनामङ्गल काठमाडँौमा रहेको छ भन्ने सुनिएको हो । र हाल कहाँ छ थाहा छैन । केन्द्राध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट धेरै वटा मोवाईल नं. मध्ये ९८६८८६८२२३ सम्पर्क हुन्छ । तर जिल्लामा वा शाखामा कर्मचारीहरुले के गरेका छन् कसरी बसेका छन् कुनै साची नगरी छोटो फोनमा कुराकानी गर्दै टार्दै गरी रहेकोले निज केन्द्राध्यक्ष लगाएतका टिमलाई जिल्ला झिकाई स्थानीय तह स्थानीय संचारकर्मिहरुको सहरोहबरमा छलफल गराउदै हामीहरु र कृषक न्ययिक पहल गरिदिनु हुन नम्र आवेदन पेश गर्दछौँ ।
सामाजिक परिचालकहरु ः क्रमस.
नीरा पाख्रिन सविताकुमारी सुनुवार, सविना कार्की, कविता मगर, अप्सरा कार्की, सविता सुनुवार, निर्मला श्रेष्ठ, विकेस सुनुवार
रामेछाप नगरपालिका कार्यालय
मन्थली नगरपालिका कार्यालय
(यस संस्थाको बारेमा रामेछापको चर्चित खोजमूलक साप्ताहिक पत्रिका ‘मालश्री’ ले फागुन २० मंगलबार, २०७६ को अंकमा प्रकाशन गरेको ब्यानर न्यूज जस्ताकोतस्तै)
रामेछाप र मन्थली नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर संचालन भइरहेको कृषि वन कार्यक्रमले धेरै कृषकहरुलाई निराश बनाएको छ ।
रामेछाप र मन्थली नगरपालिका भित्रका प्राय सबै वडाहरुमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर संचालन भइरहेको परियोजनाले न त नगरपालिकाभित्र कुनै आधिकारिक अनुमति नै लिएको छ न त अनुज्ञा नै ।
रामेछाप नगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरराज दाहालले रामेछाप नगरपालिकाभित्र कृषि वन कार्यक्रम नामक परियोजना संचालनका लागि अनुमति दिएको भएता पनि नगरक्षेत्र भित्रको गैरसरकारी संस्थाको गतिविधि तथा नियमन गर्ने निकाय स्वरुप उपप्रमुखलाई समेत थाहै नदिई सो अनुज्ञा लिएको स्वयं उपप्रमुख बताउँछिन् । ‘कृषि वन कार्यक्रमले रामेछाप नगरपालिकाभित्र के कस्तो अनुमति लिएर काम गरिरहेको छ ? भन्ने मालश्रीको जिज्ञासामा रामेछाप नगरपालिकाकी उपप्रमुख सिर्जना खड्का भन्छिन्, ‘यो संस्थाको कुनै पनि आधिकारिकता नगरपालिकासँग आएको छैन । पहिलाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त्यस संस्थालाई अनुमति दिनुभएको भन्ने जानकारी सम्म प्राप्त भएको छ । बाँकी कुरा मलाई थाहा छैन । मेरो अन्डरमा नगरभित्रका गैरसरकारी संस्थाहरु हुने भएता पनि यो संस्थाको बारेमा मैले कुनै लिगल जानकारी पाएको छैन । गाउँगाउँमा कृषकहरुलाई ठगी गरिरहेको छ यो संस्थाले भन्ने विभिन्न व्यक्तिहरुबाट मौखिक गुनासो आउन थालेपछि पटक पटक यो संस्थालाई आफ्नो कागजपत्र लिएर कार्यलयमा आउनू भन्दा पनि कोही व्यक्ति सम्पर्कमा आएको छैन । अब यो संस्थाको वास्तविकता बुझी कानुनी बाटोमा जानुपर्ने देखिएको छ ।’
तस्वीर : मालश्री फागुन २०, २०७६ मा प्रकाशित समाचार । मालश्री ब्यूराे ।
रामेछाप नगरपालिका जस्तै मन्थली नगरपालिकाभित्र पनि यो संस्थाले काम गरिरहेको छ । स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र कुनै गैरसरकारी संस्थाले काम गरिरहेता पनि मन्थली नगरपालिकालाई पनि सो संस्थाको बारेमा कुनै अत्तोपत्तो नभएको जानकारी नगर प्रमुख रमेशकुमार बस्नेत बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘म यो संस्थाको बारेमा अनविज्ञ छु । वातावरणसंरक्षण परियोजना मात्रै मन्थली नगरपालिकासँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको संस्था हो । नत्र भने कृषि, वन सँग सम्बन्ध राखी हाल कुनै कार्यक्रम लिएर आएको संस्था अरु मेरो जानकारीमा छैनन् ।’
कृषक ठगीको गजबको पाटो
स्थानीय सरकारको गठन भइसकेपछि गाउँगाउँमा कृषि क्षेत्रमा निकै मोटो रकम खर्च भइरहेको छ । त्यसको उपादेयता कति हदसम्म छ, त्यो त भोलिका दिनले समीक्षा गर्ला । तर पनि कृषकहरुलाई विभिन्न अनुदान तथा सहयोग गर्ने धेरै निकायहरु स्थानीय क्षेत्रमा संचालनमा छन् । यता यो संस्थाले भने कृषकहरुलाई अनुदान दिनुको साटो उल्टो रकम असुलेर बिल्लीबाठ बनाएको पाइएको छ । हरेक नगरका वडाहरुमा एक÷एक जना सामाजिक परिचालकहरु खटाएर १० जनाको समूह बनाउँदै समूहमा विभिन्न सपना बाँढ्न लगाएर प्रति व्यक्ति ५ सय रुपैयाँ देखि २ हजार रुपैयाँ सम्म असुलेको हो । यसमा प्रत्येक समूहमा कृषकहरुलाई भेला गर्दै विभिन्न सिजनल कृषि बिऊ, बिजन, कृषि औजार लगायतका सामग्री दिन्छु भनेर सो करम असुल्न लागइएको र कतिपय २ हजार रुपैयाँ तिर्ने कृषकदेखि ५ सय रुपैयाँ तिर्ने हरेक कृषकहरुले आफ्नो लगानी बापतको मूल्य २ हजारबाट ७ वटा मलेसियन सालको बिरुवा र पौष महिनामा एक÷एक पोका प्याजको बिऊ पाएको एक सामाजिक परिचालकले मालश्री लाई जानकारी दिएका छन् ।
गत २०७५ चैत्रदेखि संचालनमा आएको सो परियोजनाको केन्द्रीय कार्यालय सिनामंगल, काठमाडौंमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । तर आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय सिनामंगलको कुन ठाउँमा रहेको छ ? भन्ने कुरा हाल कृृषि वन कार्यक्रमको रामेछाप शाखा प्रमुखको रुपमा रहेका सरोज लामालाई समेत थाह छैन ।
असुलेको रकम हातहातै, बैंकमार्फत गएन
कृषि वन कार्यक्रमले कृषक समृद्धिको लागि भन्दै असुलेको ५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँ सम्मको रकम सामाजिक परिचालकहरुले कुनै बंैक खातामा जम्मा नगरी हातहातै बुझाएको जनाएका छन् भने बुझेको रकम पनि यस कार्यक्रमले बैंक खातामार्फत खुलाएको छैन । यस्तो जानकारी पाएपछि ‘यत्रो परियोजना संचालन गरिसकेपछि पनि बैंक खाता किन नखोल्नु भएको ?’ भन्ने मालश्रीको जिज्ञासामा शाखा प्रमुख लामा भन्छन्, ‘हामीलाई केन्द्रले नै बैंक खाता खोल्न अनुमति दिएको छैन । केन्द्रले चिठी नपठाई हामीले यहाँ कुनै बंैकमा पनि खाता संचालन गर्न मिल्दैन ।’
लामाको यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण कुराले कृषकहरुबाट असुलेको यस किसिमको रकमको दुरुपयोग हुनसक्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । करिब १ वर्ष अघिदेखि रामेछाप जिल्लामा संचालनमा आएको परियोजनाको बैंक खाता समेत नहुनुलाई निकै शंकास्पद रुपमा लिन सकिने ठाउँहरु छन् ।
सामाजिक परिचालकहरु गाउँ जान सक्दैनन्
यस कार्यक्रमका लागि छनोट भएका सामाजिक परिचालकहरु गाउँ फर्कन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । गाउँमा गएर २ सय जना सम्मको समूह बनाएर पैसा असुल गरिसकेकी एकजना सामाजिक परिचालकले भनिन्, ‘अब म गाउँ फर्कन सक्ने अवस्था छैन । मेरो अफिसले कृषकहरुलाई जुन सपना बाँढ्न लगाएको थियो, सो अनुसार कृषकलाई दिने भनेको न बिऊ दिन सक्यो, न त अन्यकुनै कृषि सामग्री नै । अहिले गाउँबाट फोन आको आयै छ । फोन उठाउँन नपाउँदै ‘आफ्नो बिहे खर्च उठाइस् होला नि हैन ?’ भनेर प्रश्न तेर्सिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा न संस्थाले कुनै रेस्पोन्स दिएको छ, न त हामीले नै केही गर्न सकिने अवस्था छ ।’
कार्यक्रमको ढाँचा, नेटवर्किङ्ग बिजनेश जस्तै
कृषि वन कार्यक्रमको कार्यशैली जस्तै झण्डै हिजोका हर्बो, युनिटी लगायतका गैर कानुनी नेटवर्क बिजनेश जस्तै देखिएको छ । सामाजिक परिचालकहरु छनोट गर्ने समयमा प्रति परिचालक १ हजार रुपैयाँ मासिक तलब दिने भनिएता पनि मासिक १० हजार तलब कसैले पनि पाएका छैनन् । गाउँमा गएर कृषकहरुलाई झुटो सपना देखाएर ल्याएको प्रति सदस्य ५ सय रुपैयाँ रकमबाट १ सय २५ रुपैयाँका दरले सामाजिक परिचालकहरुलाई दिएएको छ । एक परिचालकले २ सय जना सदस्य अर्थात् २० समूह बनाएपछि मासिक १७ हजार रुपैयाँ दिने, संस्थामा इनडोर काम दिने र अफिस पोशाक समेत दिने भनि मौखिक सहमति गरिएको अवस्थामा न कोही इनडोर स्टाफ बन्न सके, न त कसैले अफिस पोशाक नै पाए ।
नियुक्ति पत्रको समेत आधिकारिक व्यवस्था नगरी गाउँमा कृषकहरुलाई भ्रममा पारी रकम असुल्न पाठाएको उक्त संस्थाले आफ्नो कानुनी प्रावधान समेत कार्यरत क्षेत्रमा पु¥याएको छैन ।
यस्तो गतिविधिलाई नियाल्दा कृषि, वन कार्यक्रको गतिविधि निकै शंकास्पद देखिएको छ । हाल रामेछापका २ वटा नगरपालिकामा कार्यक्षेत्र बनाएको संस्थाको कार्यालय, बसपार्कमा रहेको छ ।
आफूले खान पाए ठिक, नपाए बेठिक । कैलाश ढुङ्गेलको त्यै व्यवहार हो ? : नेता तामाङ
Kumar Shrestha calendar_today २९ मङ्सिर २०७७, 1:14 pm
२९ मंङ्सिर, रामेछाप ।
वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारको विरोधमा नेपाली काँग्रेसको देशब्यापि विरोध ¥यालीको क्रममा सोमबार मन्थलीमा पनि विरोध ¥याली निकालिएको छ । जिल्ला स्तरका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सभागितामा भैसेश्वर चोकदेखि कटहरबोटसम्म आइपुगेको ¥यालीमा करिब २ सय जना भन्दा बढिको सहभागिता रहेको थियो ।
पछिल्लो समयमा वर्तमान सरकारको कार्यशैली तथा केही दिन अघि तनहुँमा नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि प्रहरीले गरेको ज्यादतीको विरोध स्वरुप उक्त ¥यालीको आयोजना गरिएको हो । आइतबार बेलुका मन्थलीको देवकोटा चोकमा नेपाली काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता भेला भई सिटी जुलुस पछि आयोजना गरिएको कोणसभामा सोमबार विरोध ¥याली गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
सोमबार भएको विरोध ¥याली पछि देवकोटा चोकमै कोणसभाको समेत गरिएको थियो । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सालिक नजिकै गरिएको सभामा नेपाली काँग्रेसका जिल्लास्तरका नेताहरुले वर्तमान सरकारको चर्को विरोध गर्दै मन्तव्य राखेका थिए । ‘केपी ओलीको चमत्कार, जताततै भ्रष्ट्राचार’ भन्ने जस्ता नारा लगाउँदै गरिएको कार्यक्रममा बोल्ने सबै वक्ताहरुले वर्तमान सरकारको कामगर्ने तरिका र नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि भएको प्रहरी दमनको विरोध गरेका थिए ।
नागरिकहरुको प्रत्यक्ष मतदानबाट स्थापना भएको कम्युनिष्ट सरकारबाट नागरिकहरुकै कुनैपनि अत्यावश्कीय मुद्धाहरुको सम्बोधन नभएकोमा काँग्रेस नेतृ गङ्गा अधिकारीले ठाडो कटाक्ष गरेकी थिइन् । नागरिकमैत्री सरकार बनेपछि स्वयं नागरिकहरुका अधिकार र पहुँच स्थापित हुनुपर्ने भन्दै नेतृ अधिकारीले नागरिकहरुले अहिलेको सरकारको कार्यशैली देखेर अबको कार्यकालका लागि नेपाली काँग्रेसलाई मतदान दिनुपर्ने धारणा राखेकी छिन् ।
कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै अधिकारीले अगाडि भनिन् ‘नागरिकहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यको विषयलाई गहनसँग उठानका लागि समेत अबको कार्यकालका लागि नेपाली काँग्रेसलाई जिताउनु पर्छ ।’
नागरिकहरुका हक र अधिकारलाई सुनिष्चित गर्ने बहानामा संविधानसँग बाझिने गरी विभिन्न विध्येकहरु वर्तमान सरकारले ल्याउने गरेको तर्फ अर्का नेता धु्रव लामाले प्रहार गरेका थिए । पहिलो वर्ष विभिन्न बहाना गरेर कार्यकाल बिताएको वर्तमान सरकारले दोस्रो वर्ष व्यापारिहरुको ढाड सेकिनेगरी बढाएको करको बारेमा लामाले आफ्नो अभिमत व्यक्त गरेका थिए । विकास र संवृद्धिको सुनिष्चितताका खातिर वर्तमान सरकारले बढाएको करको दायराले नेपाली नागरिक र विशेषगरी व्यापारीहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको तर्फ लामाको मन्तव्य केन्द्रीत थियो । मन्तव्यकै क्रममा लामाले अगाडि भन्छन्, कोरोना भाइरसको समयमा विभिन्न खाले मेडिकल माफियासँग मिलेर यो सरकारले करोडमा होइन, अरबौं अबर भ्रष्ट्राचार गरेको छ । डब्लुएचओबाट आएका करोडौं करोड रकम भ्रष्ट्राचार गरेको छ । वर्तमान ओली सरकारको कार्यशैलीका कारण नागरिक सुरक्षा लगायतका ३ वटा ठूलाठूला समस्याहरु चुनौतिको रुपमा खडा भएको छ । वर्तमान संघीय लोकतान्त्रीक व्यवस्थामा माथिको चुनौति समेत खडा भएको छ ।’
बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको ¥याली बाट कोणसभा सम्पन्न हुँदा सम्म करिब ३ घण्टाको समय बितेको थियो । जन उपस्थिति भन्दा पनि बढी कार्यकर्ताहरुको जमातलाई नेपाली काँग्रेसका जिल्लास्तरीय नेताहरुले सम्बोधन गरेझैं लाग्दथ्यो । सम्बोधनका क्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता तथा निर्माण व्यवसायी पूर्णबहादुर तामाङ कान्छारामले पनि सम्बोधन गरेका थिए । गत एक वर्षमा आफूले जिल्लाको विभिन्न स्थानमा बाँढेका एम्बुलेन्समाथि आफैंप्रति प्रश्न तेर्सिएको तर्फ इङ्गित गर्दै तामाङ्ले कोरोना भाइरसका कारण भएको लकडाउनमा आफैंले मान्छे ओसार्न एम्बुलेन्स प्रयोग गरेको भन्ने आरोप लागेको समेत उनको धारणा थियो । वर्तमान प्रदेश सभा सांसद तथा बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री समेत रहेको कैलाश ढुङ्गेलले आफूमाथि विभिन्न आरोप लगाएको समेत तामाङ्ले कार्यक्रममा बताएका थिए । नेपालका कम्युनिष्ट हरुले २०६३ सालमा फालि सकिएको राजा पुन ल्याउन लागेको आरोप समेत उनले लगाएका थिए । विभिन्न संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने फलामे रडमा प्रतिकिलो २२ रुपैयाँ सम्म मूल्यवृद्धि गरेर वर्तमान सरकारले अर्को निर्वाचनका लागि नगदको जोहो गर्न लागेको धारणा तामाङ्ले राखेका थिए । सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता तामाङले अगाडि भने, ‘वर्तमान समयमा नेपालका सम्पूर्ण प्रदेशहरुमा ३ अरबको भ्रष्ट्राचार भएको छ । भ्रष्ट्राचार नभएको जिल्ला सिन्धुली र रामेछाप मात्रै हो । रामेछापमा उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नमान्दा कैलाश ढुङ्गेलले एक इन्जिनियरको सरुवा नै गरिदिएका छन् । आफूले खान पाए ठिक, नपाए बेठिक । कैलाश ढुङ्गेलको त्यो व्यवहार हो ?’ तामाङले प्रश्न उठाएका थिए ।
सभामा बोल्ने सबैजसो वक्ताहरुले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीको ठाडो विरोध गरेका थिए ।
जनअपेक्षा अनुसार काम नहुँदा राजतन्त्रको माग गर्दै जनता सडकमा उर्लिए
जनता भ्वाइस calendar_today २८ मङ्सिर २०७७, 6:26 am
(पछिल्लो समय नागरिकहरु राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै सडकमा उर्लिएका छन्। ठूलो आन्दोलन र संघर्षले जन्मिएको गणतन्त्रप्रति किन नागरिकको वितृष्णा बढ्दै छ? कतै नेकपाको सरकारकै कारण त यस्तो भएको हैन? यसै सन्दर्भमा लामो समय देखि तत्कालिन नेकपा माओबादीबाट राजनीति सुरु गरी हाल नेकपाबाट निर्बाचित बर्दीबास नगरपालिका वडा नं ७ का अध्यक्ष फाल्गुण सुस्लिङ मगरसंग संवार्ताकार उद्धव अविचलले गर्नुभएको संवादको संपादित अंश।)
पछिल्लो समयमा जनताहरु सरकारसंग पूर्ण रुष्ट भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ, तपाई पनि स्थानीय सरकारको प्रतिनीधित्व गर्नु हुन्छ, तपाईको चाँहि के बिचार छ ?
कम्युनिस्ट सरकार सत्तामा आयो भने जनमुखी काम गर्नेछ भन्ने चुनाव अघि जनता को भरोसा र आसा थियो । त्यस्तै सोचवीच दुई ठुला पार्टी को कार्यगत एकता समेत भयो र निर्वाचन मा तीन तहमा नै जनता ले अमुल्य मत दिई कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुई तिहाइ नजिक को म्यान्डेड दियो । जुन आशा र आकाङ्क्षा जनताले राखेका थिए विभिन्न कारण ले जनताले सोचेको र चाहेको जस्तो काम हुन सकेन।सरकारले कर बढायो यसले जनता को ढाड सेक्ने काम गर्यो बास्तवमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति पश्चात् तीन तहमा राज्यका अधिकारहरु प्रत्यायोजन भयो । हिजोका दिनमा झै जनकपुर जलेश्वर र काठमाण्डौ जानु पर्ने प्रशासनिक बाध्यता हटेर गएको छ। अहिले संविधान बनेपछि को पहिलो निर्वाचन भएको ले विभिन्न ऐन कानुन कार्यविधीहरु बन्न बाकी रहेकोले पनि समस्या उत्पन्न भएको नै हो । कामै नभएको चाहिँ होइन तर जन अपेक्षा अनुसार नभएको ले पनि जनता रुष्ट भएका चाहि पक्का हुन् ।
राजतन्त्र र हिन्दुराष्टको माग गर्दै स्वतन्त्र नागरिकहरु सडकमा उर्लिरहेका छन्, के यो तपाईहरु प्रतिको जनताको बितृष्णा हैन र?
शान्तिपूर्ण आन्दोलन जुलुस सभा गर्न पाउनु नागरिकको स्वतन्त्र अधिकार हो। अहिले जुन किसिमले राजतन्त्रको समर्थनमा जुलुसहरु निस्की रहेका छ्न् त्यो हाम्रै सरकारको कारणले हो जस्तो लाग्छ, किन भने हिजो “सिंहदरवार गाउँ- गाउँमा ” भन्ने नारा सहित चुनाव मा होमियौ र जित हासिल गर्यौ। अहिले एक जना मेयर अथवा प्रदेश माननीयलाई भेट्न चिट काटेर तीन दिन अघि नै समय लिनु पर्ने अवस्था आएको छ । यही सिस्टम हो त आम नागरिकले चाहेको? अर्कातर्फ चरम भ्रष्टाचार कमिशन को खेल भइरहेको छ।आफूलाई छोटे राजाको रुपमा प्रस्तुत गरेका छ्न जन निर्वाचित केही जनप्रतिनीधिहरुले। चित बुझ्दो काम सबैतिर भएको छैन । त्यही आक्रोस र वितृष्णाका कारण नागरिकहरुले विकल्प खोज्दै सडकलाई रोजेका हन् नै। तर अहिलेको परिवेशमा यो सम्भव छैन जुलुस र नारा लगाँउदैमा राजतन्त्र फर्की हाल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई?
तपाई लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय व्यक्ति हुनुहुन्छ । तपाईल गरेको राजनीतिले तपाईको वडाका नागरिकहरुले कतिको सेवा सुविधा लिएका छन्?
मेरो राजनैतिक यात्रा को सुरुवात ०४९ साल मा अ .ने .ज.युवालिगको सदस्यता प्राप्ती पछि भएको हो। विभिन्न पारिवारिक समस्या को कारण होलटाइमर भएर हिड्न सकिएन । मैले सकृय राजनैतिक यात्रा २०६४ बाट शुरु गरेको हु। तत्कालिन नेकपा माओवादीमा रही शुरु भएको हो। पार्टीको जनबर्गिय सङठन वाइसियल (YCL) नेपाल महोतरी जिल्ला बरिष्ठ उपाध्यक्ष , मगर मुक्ती मोर्चाको जिल्ला सचिव र पार्टी जिल्ला सदस्य हुँदै राजनैतिक यात्रा अघि बढेको हो। म निर्वाचित भए पछि म जनप्रतिनिधि भन्दा पनि जनताको सेवक भएर काम गरिरहेको छु ।जनताका हरेक समस्यामा डटेर लाग्ने र जनताको पक्षबाट उभिएर समस्याको सामना गरेको छु। प्रशासनिक सेवा छिटो, छरितो र बिना झन्झट काम गरिरहेको छु । हामी जनतामाथी शासन गर्न निर्वाचित भएका होइनौ । उहाँ हरु लाई छरितो सेवा प्रवाह दिन निर्वाचित भएका हौ । म दावाका साथ भन्न सक्छु प्रशासनिक र मेरो वडाबाट पाउने सेवामा जनता बेखुसी छैनन् ।
पछिल्लो समयमा खेल क्षेत्रमा पनि यहाँको सक्रियता देखिन्छ, एउटा नागरिक अगुवाको भूमिका पनि निर्वाह गरिरहनु भएको छ? सबै क्षेत्रमा काम गर्न अलि कठीन भएको महशुस गर्नुहुन्न?
म पूर्व फुटवल खेलाडी पनि हुँ। त्यसैले खेलप्रतीको मोह र माया म भित्र ज्यादा छ। पछिल्लो समयमामा बर्दिवास नगरभित्र खेलकुद गतिविधि ढप्प भएको महसुस भयो। विभिन्न खेलाडी भाइहरुले गुनासो गर्नुभयो । उहाँहरुले म प्रति आशा गरेकोले मैले त्यो कर्तव्य पूरा गरे । मैले आफ्नो व्यक्तिगत रममबाट र मैले पाउने मासिक प्रशासनिक खर्च मिलाई करिव रु१२५०००/- बरावर को खेककुद सामाग्रीहरू बितरण गरेको छु। साथै खेलकुद मा युवा बर्गलाई आकर्षित गर्न र खेल लाई व्यवसायिक बनाउन सकिए विभिन्न कुलतबाट युवालाई जोगाउन सकिने रहेछ भन्ने महशुस गरेको छु मैले। साथै युवालाई खेल क्षेत्रबाट जोविकोपार्जन गराउन सकिने रैछ भनेर अघि बढेको हुँ । यसको अलवा नागरिकको हकहितमा काम गर्दा मैले आजसम्म कही कतै पनि आफूलाई अप्ठेरो महशुस गरेको छुँइन।
देश कोरोना भाईरसको संक्रमणले ग्रसित छ । यस्तो विषम् परिस्थितिमा तपाईको वडाले कस्तो सजगत अपनाइरहेको छ?
अहिले देश कोभिड महामारी को चपेटा मा छ। त्यसमा मेरो वडा अछुतो रहने कुरै भएन । पछिल्लो चरणमा भारत लगायत अन्य मूलुकबाट आउने व्यक्तीहरुलाई बोर्डर सम्म ज्यान जोखिम मोली नगर को क्वारेन्टाइन मा राखियो । विभिन्न सचेतना र जनचेतताको लागि घरदैलो देखि मास्क बितरण, हात धुने स्टेसन सार्वजनिक स्थान मा राख्ने काम भयो । लकडाउन को कारण काम गर्न नसक्ने भोका परिवार लाई राहतको अभाव हुन दिइन। लगभग सवै वडा भन्दा धेरै चोटि राहत मेरो वडामार्फत बितरण भयो। जनतालाई भोको रहन दिइएन ।अहिले बिस्तारै बिधालय खुलेका छन बिद्यार्थीहरु लाई सुरक्षित रुपमा पठनपाठन गराउन प्रत्येक बिधालयमा हेन्डवास स्टेसन बनाइएको छ। स्वास्थ्य सचेतना अपनाइएको छ । अझ संक्रमणको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै , हामीहरुले थप सजगता र होशियारी अपनाइरहेका छौ।
अब हामीले भोट माग्ने ठाउँ नै छैन : मन्त्री ढुङ्गेल (भिडियो सहित)
जनता भ्वाइस calendar_today २८ मङ्सिर २०७७, 5:09 am
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कामको स्वाद लिने बेला नभएको बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बताएका छन् । मन्थली नगरपालिका वडा नंं १३ मा रहेका श्री मा.वि. हर्रे चिण्डेको नव निर्मित विद्यालय भवन उद्घाटन गर्ने क्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
उनका अनुसार एउटा किविको फल खान त ३ वर्ष कुर्नु पर्छ भने सरकारको कामको प्रतिफल लिन अझै समय कुर्नु पर्छ । नेकपाको सरकार आएपछि सडक कालोपत्रे धेरै भएको छ र बिजुलीबत्ती समेत धेरै बलेको छ । नेकपा सरकारको यस्तो काम देखेर नागरिकहरू आत्तिई सकेको मन्त्री ढुङ्गेलको कथन छ ।
ढुङ्गेल थप्छन्:अब हामीले भोट माग्ने ठाउँ नै छैन । नागरिकलाई चाहिने जति सेवा सुविधा हामीले दिई सकेका छौँ । अब के भनेर भोट माग्ने ? कालो पत्रे चाहिँदैन भने भोट देउ भनेर माग्ने ? कि विद्यालयहरू चाँहिदैन भनेर भोट माग्ने ? हामीले सुविधा सम्पन्न विद्यालय बनाई सकेका छौँ । हामीले सडकहरू धमाधम कालोपत्रे गरेका छौँ । गाँउगाउँमा बिजुली बत्ती पुर्याएका छौँ ।’
मन्तव्यका क्रममा नेपाली कांग्रेसले कहि कतै बाटो नबनाएको मन्त्री ढुङ्गेलले आरोप लगाएका छन् । मन्त्री ढुङ्गेलका अनुसार काम गरे पछि बिग्रने भत्कने हो । नेकपाको सरकारले काम गरेको छ, बाटो बनाएको छ र त भत्किन्छ । नेकपाको सरकारले गरेको विकास देखेर डाहा गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
पुरै जन्ती किच्याउने ढुङ्गा, जो बौद्ध धर्मको मन्त्र बोकेर उभिईरहेकोछ (भिडियो सहित)
जनता भ्वाइस calendar_today २१ मङ्सिर २०७७, 4:33 am
प्रकाश न्यौपाने/कुमार श्रेष्ठ, रामेछाप ।
पर्यापर्यटनले भरिपूर्ण रहेको गोकुलगंगा गाउँपालिकाको चुचुरेमा रहेको ठूलो ढुङ्गा प्रचारप्रशारको अभावमा ओझेलमा परेको छ । आध्यात्मिक बौद्ध दर्शनलाई जीवन्त राख्न सफल भएको यो ढुङ्गा सरोकारवाला निकायको दूरदृष्टिको अभावका ओझेलमा परेको हो ।
गोकुलगंगा गाउँपालिका वडा नं. १ चुचुरेको साङ्बाडाँडा सँगै रहेको यो ढुङ्गा ठूलो ढुङ्गा नामले परिचित छ । यो ढुङ्गा सम्भवतः यस पालिका भित्रकै साँच्चै नै ठूलो ढुङ्गा हो भने चुचुरे क्षेत्रको चाहिँ ठूलै ढुङ्गा भएको स्थानीयहरु बताउँछन् । यस ढुङ्गामा १ हजार ८ बौद्ध धर्मका लामा गुरुहरुले उच्चारण गर्ने मन्त्रहरु कुँदिएका छन् । करिब २ सय मिटर भन्दा बढी गोलाई रहेको यो ढुङ्गाको वजन कति छ ? भनेर सिधा आँखाले अनुमान लगाउन सकिँदैन । हेर्दा साँच्चै अजङ्गको ढुङ्गा देखिन्छ । यस ढुङ्गामा कुँदिएका लामा मन्त्रहरु सामान्य मान्छेले पढ्न सक्ने खालका छैनन् ।
यस ढुङ्गाको बारेमा निकै रोचक किंवतन्दी भएको स्थानीय होमप्रसाद दाहाल बताउँछन् । दाहालले पनि यस ढुङ्गाको किंवदन्तीलाई सुनेको आधारमा आफूले सुनाउन सकेको हामीलाई बताएका छन् । उनका अनुसार यस ढुङ्गा भएको ठाउँमा परापूर्व कालमा ठूलो पोखरी थियो । एक पटक कुनै स्थानबाट बिहेको जन्ती आएको र रात परेका कारण ती जन्तीहरु यसै ढुङ्गाको ओडारमा बास बसेको साथै खानपिन समेत सोही ठाउँमा गरेका थिए । बास बस्ने व्यक्तिहरुले पोखरीको पानी प्रयोग गरी पोखरीमा जुठो गरेको कारण दैवी शक्तिमा क्रोध पालाउन गई ढुङ्गा पल्टिएको र सो ढुङ्गाले किचेर दुलाहा दुलही सहित् सबै जन्तीहरु किचिएको जन आहान रहेको छ ।
शाक्यमुनी गौतम बुद्धको आराधानामा प्रयोग गरिने मन्त्रहरु कुँदिएको अहिले प्रत्यक्ष देख्दा भने साँच्चै अचम्म लाग्ने गर्दछ । मार्तोल र छिनोको प्रयोग गरेर मात्र यी मन्त्रहरु यस ढुङ्गामा कुँद्न सकिने अवस्था भएको वास्तविकतामा विगत लामो समय पहिला यी अक्षरहरु कसरी कुँदिए भनेर जो कोहीको मनमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुने नै गर्दछ । अजङ्गको ढुङ्गामा यति मेहनत गरेर आखिर यी मन्त्रहरु कति वर्ष अघि कुँदिएको होला ? प्रश्न आफैँमा अनुत्तरित छ । कसलाई सोध्ने या को बाट बुझ्ने ? सोच्न मन लाग्ने खालको छ ।
यस ढुङ्गाको उत्तरपट्टी देवीको मन्दिर समेत रहेको छ । यस मन्दिरमा हरेक चण्डीपूर्णिमा र बाल चतुर्दशीमा मेला लाग्ने गरेको दाहाल बताउँछन् ।
नेपाल आफैंमा धार्मिक सहिष्णुता भएको देश हो । नेपालमा धर्मका नाममा न यहाँ कहिल्यै झगडा भयो न त दंगा फसाद् नै । यसैको उदाहरण स्वरुप यस ढुङ्गामा कुँदिएका बौद्ध धर्मका मन्त्रहरु र सँगै रहेको देवी मन्दिरको समान सार्थकता र महत्वले यस क्षेत्रलाई अझ भक्तजनहरुको मिश्रित उपस्थितिको सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ ।
शाक्यमुनी गौतम बुद्ध आफैंमा नेवारी समुदायका व्यक्ति हुन भन्ने समेत कहिँकतै विश्वास गरिएको छ । यद्यपि गौतम बुद्ध नेवारी समुदायका हुन् कि हैनन् भन्ने यकिन गर्न सकिएको छैन । विभिन्न समयमा प्रकशन भएका विविध शोध सामग्री तथा अनुसन्धानलाई समेत मध्यनजर गर्ने हो भने उनी शाक्य वंशका हुन् ।
हालका दिनमा शाक्यहरु नेवारी समुदायका हुनु र हिनायाना बुद्धको रुपमा नेवारहरुले बौद्ध धर्मलाई मानिरहेका हुनुले गौतम बुद्ध नेवारी समुदायका हुन् कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । जो कोहीले गर्ने अनुमानलाई अझ बलियो बनाउन यस ढुङ्गामा प्रयोग गरिएको रञ्जना लिपिलाई लिन सकिन्छ । यहाँ कुँदिएका अधिंकाश मन्त्रहरु चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा प्रयोग हुने भोटे भाषाको सम्बोटा लिपि प्रयोग भइरहेको अवस्थामा नेवारी भाषाको रञ्जना लिपि समेत यस ढुङ्गामा प्रयोग हुनुले यहाँ जातीय तथा भाषिक सहिष्णुताको सन्देश समेत अझ बलियो भएको छ ।
हाल यो ढुङ्गामा कुँदिएका लिपिहरुलाई विभिन्न रङ्ग लगाएर कलात्मक बनाइएको छ । अघिल्लो वर्ष गोकुलगंगा गाउँपालिकाद्वारा विनियोजित ४ लाख बजेटले अक्षरहरुमा रंग लगाउँदा यसको प्राकृतिक सुन्दरता केही खस्केको जस्तो देखिएको छ । विभिन्न रंगका इनामेल लगाइको कारण यस ढुङ्गामा अक्षर कुँदिएका भन्दा पनि रंगले अक्षर लेखिएको जस्तो देखिएको छ ।
परापूर्व कालमा जे जस्तो महिमा र गरिमा रहेको भएपनि साविक झैं यहाँ अझै पनि बलिप्रथा चल्दै आएको छ । शाक्यमुनी गौतम बुद्धको उपदेशमा भनिए झैं अहिंशावादी सोचको खिलाफ हुनेगरी यस स्थानमा बली पूजा हुनुले यस ढुङ्गाको बौद्ध दार्शनिक मर्ममा भने चोट पुगेको छ । हुन त ढुङ्गाको उत्तरतर्फ रहेको देवी मन्दिरमा बलि चढाउने गरिएको छ । यसै पनि देवी भगवतीलाई बलि चढाउने गरिएको सन्दर्भमा अहिंशावादी बौद्ध परम्परालाई साँक्षी राखेर बली प्रथा समेत सँगै लैजानु सान्दर्भिक नभएको र निकट भविष्यमा नै बुद्धिष्ट समाजसँग समन्वय गरी बलिप्रथालाई अन्त्य गर्ने कुरामा आफूहरु लागिरहेको दाहाल बताउँछन् ।
गोकुलगंगा गाउँपालिकाले आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्र भएका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको संरक्षणका लागि गरेको प्रयासलाई निकै प्रशंसनीय मान्न सकिन्छ । चुचुरेको खिम्ती किनारमा रहेको स्टोन गार्डेन देख्दा मुस्ताङ्को झल्को आउने गर्दछ । यहाँ पुगेपछि देखिने नजारा निकै मनमोहक छ, जसको शब्दमा कुनै वर्णन नै सम्भव छैन । छिमेकी जिरी नगरपालिका १ नं. वडासँगै रहेको यस क्षेत्र र साङ्बाडाँडामा रहेको ठूलो ढुङ्गा जस्ता क्षेत्रहरुलाई अझ धेरै प्रचारप्रशार गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिने यसै वडाका वडाध्यक्ष मणीकुमार लामा बताउछन् ।
दोखलाको जिरी हुँदै गोकुलगंगाको तामे, जट्टापोखरी र सोलुको सगरमाथा बेस क्याम्प सम्म पुग्ने पदमार्गमा पर्ने चुचुरे क्षेत्र पर्या पर्यटन प्रवर्धनका लागि गतिलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । चुचुरेका चौंरीको दूधबाट बनेको चिजलाई चपाउँदै र छुर्पीलाई चुस्दै गर्ने पदमार्ग यात्रा निकै हितकारी बन्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।